Webinar: COVID-19 uye Retail - Maitiro Anoshanda Ekuwedzera Kushambadzira Kwako Cloud Investment | Martech Zone
Hapana mubvunzo kuti indasitiri yekutengesa yakapwanywa nedenda reCOPVID-19. SeVatengi veKushambadzira Cloud, zvakadaro, iwe une mikana iyo vako vanokwikwidza vasingaiti. Denda racho rakurudzira kutorwa nedhijitari uye hunhu ihwo hucharamba huchikura hupfumi pahunopora. Mune ino webinar, isu tichaenda kupa matatu akapamhama matekiniki uye gumi nemaviri matanho akanangana navo kuti sangano rako rinofanira kukoshesa nhasi - kwete kungopona dambudziko iri asi kubudirira mugore rinouya.
NaSalesforce uye Kushambadzira Cloud's yakafara uye akaomesesa akarongeka emapuratifomu uye maturusi, vatengi vavo vane mukana uri nani kwazvo wekugadzirisa iri dutu rehupfumi. Highbridge dhijitari shanduko nyanzvi (uye Martech Zonemuvambi) Douglas Karr ichakubatsira iwe kuti ukure kushambadzira kwako kwedhijitari uye kushandura mashandisiro ekambani yako yegore rekushambadzira kuti ikure kutora, kuvaka kukosha kwevatengi, uye kuchengetedza vatengi vakakosha.
Mune ino webinar, isu tinopa gumi nematanhatu marongero ayo achakubatsira kudzikisa mutengo wako pakutenga nekutendeuka, kuwedzera mari yako pakubata, uye kukwidziridzira kwako kwese kushambadzira kwedhijitari. Pamwe chete newebhu webhu, isu tinopa vanoenda kune inoenderana neyekuongorora uye zviwanikwa kuti iwe ufambe munzira.
Data - zvirongwa zvekuchenesa, kuteedzera, kuenzanisa uye kusimudzira data rako mukati meKushambadzira Cloud kudzikisa marara uye kuwedzera kushanda.
dhirivahari - zvirongwa zvekugadzira uye kuendesa mameseji kubhokisi rebhokisi, kudzivisa mafirita enjunk uye kuratidza yakatarwa nyaya dzeIP
Personnalisez - mazano ekuparadzanisa tarisiro yako nevatengi, kusefa uye kunanga makwikwi ako, uye gadzirisa kutaurirana.
bvunzo - zvirongwa zvekuyera, kuyedza, uye kugadzirisa ako mazhinji-chiteshi kushambadzira kutaurirana.
ruzivo - nzwisisa kuti Einstein anobatsira sei vatengesi kuwana, kufungidzira, kukurudzira, uye kugadzirisa kwavo kushambadzira kutaurirana.
Highbridge ane zvigaro zvishoma zvasara kunze kwevatengi vavo - saka kana iwe uchifarira, ndapota nyoresa nyore ipapo:
Ndiani Anofanira Kupinda:
Vatengesi vanofarira kunzwisisa kuti Kushambadzira Cloud kunogona sei kutyaira mari kune yako yekutengesa kana e-commerce sangano.
Vatengesi vakagadzira Kushambadzira Cloud asi vangangoda kuve vakaomesesa mune yavo segmentation, personalization, uye optimization.
Vashambadziri vakashandisa Kushambadzira Cloud asi vangangoda kuisa akaomesesa makasitoma nzendo uye kuyedza mukuedza kwavo.
Vatengesi vakagadzira nzendo dzevatengi uye vangade kuisa njere dzekugadzira kuti vafambise iwo mafambiro.
Dare rehutungamiriri pa Highbridge vane makore anopfuura makumi mana ekubatanidzwa ehutungamiriri hwehutungamiriri muindasitiri yekutengesa. Vatengi vavo vakakura vanosanganisira Dell, Chase Paymentech, uye GoDaddy… asi ivo vakabatsira mazana emasangano kuvaka mapaipi emigwagwa ekushandura masangano avo. Kunze, ivo vanobatsira makambani kushandura ruzivo rwevatengi. Mukati, ivo vanobatsira makambani kugadzirisa, kusanganisa, uye kugadzirisa mapuratifomu avo kuti vagadzire chaiyo-nguva, 40-degree kuona kwevatengi vavo.